Home Wararka Nabadoon caana oo lagu dilay magaaladda Baledweyne
Nabadoon caana oo lagu dilay magaaladda Baledweyne
Waxaa goordhaw lagu dilay magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan allaha u naxariistee Nabadoon Cabdi Xuseen Coloow oo kamid ahaa Odayaasha dhaqanka Baladweyne kuwa ugu caansan.
Kooxo hubeysan ayaa Nabadoonka ku dilay albaabka laga galo gurigiisa xili uu kasoo baxay Masjid u dhawaa gurigiisa oo uu kusoo tukaday Salaadii Maqrib, kaasoo ku yaala Xaafada Buundaweyn ee magaalada Baledweyne.
Nabadoonka ayaa ka mid ahaa tiro odayaal dhaqameedyo ah oo ka tirsan Waxgaradka Beesha Xawaadle oo maanta heshiis hordhac ah la gaaray madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen.
Allah u naxariistee rasaasta lagu dilay Nabadoon Cabdi Xuseen Coloow ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay wiil yar oo ka agdhawaa goobta lagu dilay Marxuum Cabdi Xuseen Coloow.
Previous articleSomaliland: Heshiis laga gaaray isticmaalka xadhiga Fiber Optic-ga ee Internet-ka
Next articleLafta Gareen oo banaanka dhigay xildhibaanadii hore, isla markaanka ku digtay
CXDS oo alshabaab ka qabsaday Deegaanka Tooratoorow
Kulan heerkiisu aad usareeyo ayaa dhaxmaray beelaha Habargidir iyo mudulood